Uruguay oo laga reebay Copa America & Peru oo iska xaadirisay afar dhammaadka tartankan xilli Luis Suarez rigoore laga qabtay.. + SAWIRRO – Gool FM
(Brazil) 30 Juunyo 2019. Xulka qaranka Uruguay ayaa laga soo cirib-tiray caawa Copa America, waxaana gool ku laadyo uga soo adkaatay Peru oo iska xaadirisay afar dhammaadka tartankan.
Kulankan adag ee dhexmaray labada xul ee Uruguay iyo Peru ayaa labadii qeybood ee ciyaarta ku soo dhammaaday barbaro goolal la’aan 0-0.
Inkastoo ay xusid mudan tahay in xulka Uruguay laga diiday labo gool oo ay dhaliyeen intii kulankani uu sacday kuwaasoo garsoorku sheegay inay ahaayeen garab dhaaf ama offside.
Waxaa loo baahday in labada xul lagu kala saaro gool ku laadyo waxaana rigooreyaal 4-5 ku adkaaday xulka Peru.
Uruguay waxa ay eersanayaan goolku laadkii ugu horreeyey ee laga qabtay Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Luis Suarez, wixii intaas ka dambeeyeyna labada xulba waa ay dhaliyeen rigooreyaashii ay tuureen.
Xulka Uruguay ayaa rigooradii ugu horreysay ee laga qabtay Luis Suarez maahane afartii kale oo ay tureen wada dhaliyey, laakiin waxaa Peru guul kaga filnaatay inay wada dhaliyeen dhammaan shantii gool ku laad oo ay tuurteen, kulan ayaana ku soo dhammaaday 4-5 rigooreyaal ay ku adkaadeen Peru.
Xulka Peru ayaa la ciyaari doona Chile oo xalay iyaguna rigooreyaal kaga soo gudbay Colombia, halka Brazil oo marti-gelinaya tartankan ay afar dhammaadka ku wajahaan xulka uu hoggaamiyo Lionel Messi ee Argentina.